नेहालाई जन्म दिन चाहँदैन थिए कक्कड परिवार ! « News24 : Premium News Channel
नेहालाई जन्म दिन चाहँदैन थिए कक्कड परिवार !
काठमाडौं । नेहा कक्कडलाई बलिउडकी चर्चित र कुशल गायिकाको रुपमा चिनिन्छ । अहिलेको समयमा गायका नेहा कक्कडसँग कुनै चिजको कमी छैन । ३३ वर्षीया गायिका नेहालाई उनकी आमाले जन्म दिन चाहदैन थिइन् ।
टोनी कक्कडको खुलासा
गीतकार तथा गायक टोनी कक्कडले केही समय अगाडि मात्रै सुरुवाती दिनमा आफ्नो परिवारको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर रहेको बताएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उनका आमा–बुबाले तेस्रो सन्तान होस् भन्ने चाहदैन थिए ।
तर, आठ साता वितिसकेको कारण उनकी आमाले अबोर्शन गर्न सकिनन् र नेहाको जन्म भयो । करियरको सुरुवाती दिनहरुमा नेहा र उनकी दिदी सोनु कक्कडले जगरातोमा भजन गाउने गर्थे । त्यतिबेला नेहा र सोनु कक्कडले भजन गाएरै पनि राम्रो पैसा कमाउने गर्थे ।
इन्डियन आइडलले दिलायो पहिचान
सिङ्गिङ रियलिटी शो ‘इन्डियन आइडल’पछि गायिका नेहा कक्कडको भाग्य चम्किएको थियो । नेहाले इन्डियन आइडल जित्न नसकेपनि गायकीको यात्रा सुरु गरिन् । त्यसपछि नेहाले सन् २००८ मा एकल एल्बम ‘नेहा द रकस्टार’ सार्वजनिक गरिन् ।
नेहाको पहिलो हिट गीत
गायिका नेहाको जुन गीत पनि सोसल मिडियामा ट्रेन्डिङमा आउने गरेको छ । फिमेल सिङगर्सको तुलनामा सोसल मिडियामा नेहाको सबै भन्दा बढी फ्यान फलोइङ रहेका छन् । बलिउडका नेहाको पहिलो हिट गीतको रुपमा ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ मानिन्छ । त्यसपछि ‘यारिया’ फिल्मको गीत ‘सनी–सनी’बाट उनले निकै चर्चा पाएकी थिइन् ।
रोहनप्रित सिंहसँग गरिन् विहे
गायिका नेहा कक्कडले २४ अक्टोवर २०२० मा रोहनप्रित सिंहसँग विवाह गरेकी छन् । पछिल्लो समय गायिकाले रोहनप्रित सिंहसँगको तस्वीर सोसल मिडियामा सेयर गर्दै आएकी छन् ।